စက်တင်ဘာလ 2014 |3၏စာမျက်နှာ 48 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » စက်တင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 3)
SMPTE 2014 In-Depth networks မီဒီယာ, ဖိုင်မှတ်တမ်း-အခြေပြုလုပ်ငန်းအသွားအလာ, မိုးတိမ်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ် Sessions အထူးပြုလုပ်ပါရန်
အဆိုပါ Motion, ရုပ်ပုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ (R) ၏အသငျး (SMPTE (R)) - စက်တင်ဘာ 25, 2014 - အကွိမျမြားစှာ-အပိုင်း Sessions သည့် Motion-image Industries, White Plains, နယူးယော့ပုံဖော်နေဘယ်လို Key ကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ပေါ် Multidimensional ပတ်သ က်. ပေးသွားမှာပါ ဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်, ယနေ့သော SMPTE 2014 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲထုတ်ပြန်ကြေညာ ...
Edmond de Rothschild ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါင်းအဖေါ်များသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်အတွက်မဟာဗျူဟာ Equity အဖော်ဖြစ်လာမှ FCDE နှင့်အတူသီးသန့်ညှိနှိုင်းထဲသို့ဝင်ရောက်လာ
စက်တင်ဘာ 25, 2014 - - သို့ခေတ်္ဘပိင်ကြီးထွားနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များခေါင်းဆောင်မှုအသံလွှင့်၌, OTT နှင့် Multi-Platform ၏ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေ RENNES, ပြင်သစ်နယူးဘဏ္ဍာရေး Partner Will Drive ကိုကုမ္ပဏီ မှစ. အရန်ကူးယူခြင်းသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်သည်နှစ်သက်မြတ်နိုးက de Consolidated တစ်အစုစုကုမ္ပဏီ & Développement des Entreprises သည် (FCDE), ယနေ့ FCDE Edmond de Rothschild ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူသီးသန့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုထဲသို့ဝင်ရကကြေညာခဲ့သည် ...
Advertising ကြော်ငြာအပတ်ရဲ့ Advertising ကြော်ငြာ Futures ပြိုင်ပွဲမှ AKA NYC ချေးကြှမျး
Entertainment ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီနှစ်ပတ်လည်ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပြီးအထက်တန်းကျောင်းသားများအတွက်လမ်းညွှန်သင်ပြထားပါသည်။ NEW YORK- Entertainment ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ AKA NYC ယခုနှစ် Advertising ကြော်ငြာအပတ်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ဆက်စပ် Advertising ကြော်ငြာ Futures ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နယူးယောက်မြို့ရဲ့အတောက်ပဆုံးနဲ့ဖန်တီးမှုအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားတချို့၏အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လမ်းညွှန်သင်ပြထားပါသည်။ အတွက်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်လုပ်ငန်းများ၏အကယ်ဒမီမှကျောင်းသားများ ...
DigitalGlue Globecast များအတွက်ဘက်စုံအိုင်ပီ Stream စောင့်ကြည့်ဖြေရှင်းချက်ဘဝမှကယျတငျ
Globecast ရဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားစစ်ဆင်ရေးစင်တာနယူးဖြေရှင်းချက် 300 မြောက်အမေရိကအိုင်ပီဗီဒီယို Streams Laguna NIGUEL, ကာလီဖိုးနီးယားသန်းနောက်ထပ်အဘို့အအစီရင်ခံအပြီးအစီးအခြေအနေပေး - ။ စက်တင်ဘာ 24, 2014 - DigitalGlue ယနေ့များအတွက် State-Of-The-Art အိုင်ပီစီးစောင့်ကြည့်ရေးပလက်ဖောင်းပြီးစီးထုတ်ပြန်ကြေညာ Globecast, ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များအတွက်မီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဂီယာန်ဆောင်မှုများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ။ တံတား Technologies က '' အပေါ်အခြေခံပြီး ...
Cantemo CCW မှာ Cantemo Portal ကို™ပြ
နောက်ဆုံးရဗားရှင်း Quantum နှင့် Adobe က Creative Cloud Solutions စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်, 25th စက်တင်ဘာလ 2014 နှင့်အတူ Enhanced ပေါင်းစည်းရေးပါဝင်သည် - 12th နိုဝင်ဘာလ - Cantemo ယနေ့ပြုလုပ် 13th ကနေ New York မှာ CCW မှာ Cantemo Portal ကို™၎င်း၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မည်ကြေညာခဲ့သည်။ Cantemo Portal ကို™တစ်ခုတည်းဆာဗာတွင်အသေးစား workgroups ကိုထောကျပံ့သို့မဟုတ်လိုက်လျောညီထွေနိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-class ကိုပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည် ...
လက်တင်အမေရိကရှိအားသာချက်ဗီဒီယိုစနစ်များ '' 4Kase ကိုယ်စားပြုဖို့ Market ကနည်းပညာ
on-set ကိုလုပ်ငန်းအသွားအလာစနစ်ကတစ်ဦးအပြည့်အဝ-ပေါင်းစည်းပေးဒေသတွင်းလန်းလာသောထုတ်လွှင့်, ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ BURBANK-အားသာချက်ဗီဒီယိုစနစ်များသည်၎င်း၏မိုဘိုင်း Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တည်းဖြတ်မှုစနစ်ကိုရောက်စေဖို့ Market ကနည်းပညာနှင့်အတူတစ်ဦးပြန်လည်ရောင်းချသူများသဘောတူညီချက်လက်တင်အမေရိကမှ 4Kase လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Market ကနည်းပညာထက်ပိုမို၏သူ့ရဲ့ network ကတဆင့်ထုတ်လွှင့်, ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်သူများနှင့်အခြားသူများမှစနစ်ပြန်လည်ရောင်းချရန်ပါလိမ့်မယ် ...
MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ProRes 4444 XQ များအတွက် Cortex နေ့စဉ်ပံ့ပိုးမှုကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
ဟောလိဝုဒ်-MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ယနေ့ Cortex နေ့စဉ်ဒီကုဒ်ဒါနှင့် encoding က Apple က ProRes 4444 XQ များအတွက်ထောက်ခံမှုကဆက်ပြောသည်မူကြောင်းကိုကြေညာခဲ့သည်။ ပံ့ပိုးမှုအသစ်တခု update ကို, Cortex v1.5.3 အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ProRes 4444 XQ နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာများအားဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိအသေးစိတ်ထိန်းသိမ်းအလွန်မြင့်ဒေတာနှုန်းကိုကယ်တင်တတ်၏။ ARRI မကြာသေးမီကယင်း၏လူကြိုက်များ Alexa ကင်မရာထဲမှာ codec ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ "အသစ် ...
3 ၏စာမျက်နှာ 48«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»